Haatan iyo Dan: Soo Celinta Qarankii Soomaaliyeed ee la Qalibey:
Waxaa Qorey: Wali Farah, Ottawa, Canada.
Siddeed iyo toban sano Soomaaliya dagaal sokeeye ayey ku jirtaa. Waxaana cad dagaalkaas sokeeye in uu yahay mid ay weligeed Etoobiya gadaal ka riixeysey oo ay haatanna si toos ah ugu taageerto dabadhilifyadeeda. Qormadan ma doonayo in aan dib ugu noqdo dagaalkaas dabada dheeraadey iyo faragalinta qaawan ee Itoobiya.
Waxaanse jecelahay in aan bal fikirkeyga ka dhiibto sida ay aniga ila tahay waxa haatan iyo dan la gudboon halgamayaasha Soomaaliyeed, hoggaamiyayaashooda, Culumada Soomaaliyeed, odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada Soomaaliyeedba. Sida aynu la wada soconno waxaa baryahan socday wadahadallo u dhexeeya hormuudka halgamayaasha Soomaaliyeed iyo kuwa horboodaya cadawga Soomaaliyeed iskuna sheegey in ay dowladdii yihiin. Si kastaba ha ahaatee wadahadal siyaasadeed oo ku biyashubanaya in la heshiiyo oo loo adeego danta qaranka Soomaaliyeed ayaa meel u maraya. Waxaanse kawada dharagsannahay in dhagarta cadowgu ay meesheedii tahay. Cadowguna uu mar walba heli doono ama haystaba kuwo u adeego. Waxaan kale oo aynu xaqiiqsanahay dhagarta cadowga iyo kuwa u adeegaba in aysan waxba u dhimmeyn halganka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan aad ugu kalsoonahay in guushu ku danbeyn doonto Dadka Soomaaliyeed.
Haddaba su’aashu waxay tahay, sidee xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan. Guushii halgamayaasha Soomaaliyeed ee loo dagaallamayey labadii sano ee ina soo dhaaftey miiska ayey saran tahay. Waxaa la inaga rabaa in aynu si aadaab leh inta miiska u soo wada fariisanno oo iska dayno deg degga iyo kala shakiga aynu is wareysanno oo wada hadalno oo ku heshiinno sidii halganka loo sii wadi lahaa balse waxaa la yiri “oodi sida ay u kala korreysa ayaa loo kala qaadaaye” aynu howlaha ina horyaallo u kala hormarino sida ay u kala mudan yihiin.
Maxay yihiin howlaha ina hor yaallo:
Cayrinta maxeystayaasha ciidamada Itoobiya innagoo mideysan oo aan u kala harin. Oo sida aynu ku ceyrineyo waa laba siyaabood: sida ay iygaba garowsadeen oo ah in ay iskood u baxaan oo ay haddii ay sidaas yeelayaan aynu waddada u furno. Sida kalena waa innagoo dagaal ku saarno innaga oo mideysan. Markaa tan waxay u baahantahay in aynu ku mideysannahay oo aynu isu tanaasulno oo joojinno dhammaan waxyaabaha awooddayada wiiqaya. Tani waxay u baahantahay in aynu u turno shacabkeenna oo aynu kasbanno kalsoonida ay innagu qabaan.
Dib u heshiisiinta waa arrinta kale ee ina hortaal. Waxaa jirta oo xaqiiqo ah marka dib u heshiisiin laga hadlo in ay kaliya dhex mari karto dad horey u dagaaley. Dib u heshiisiin uma baahno dad heshiis ah. Sidaa darted dib u heshiisiinta socoto waxay u dhexeysaa dabadhilifkii cadowga keeney ee dalka burburiyey iyo halgamayaashii ka dhiidhiyey. In lala hadlo dadkaas cadowga keeney oo lala heshiiyo haddii ay diyaar u yihiin waa lagama maarmaan waayo waa Soomaali waa sida layiri “fartaada oo xumaato fara gil gil kaagama harto.” Tan macneheedu ma aha in la cafiyey oo danbigii ay galeeen aan lagu soo oogi doonin. Balse waqtigii ku habboon ayaa caddaalada la keeni doonaa. In la iska cafiyana kheyrka ayaaba ku jira. Sideedaba, haddii aynu dooneyno in aynu iska dhicinno cadowga iyo cadow kalkaalka, waxaa habboon in aynu garowsanno in “aar gudashadu aysan boos ku lahayn halgan umadeed.” Waxaa la rabaa in dagaalka yagu uusan ku saleysnaan Aar Gudasho. Waxaan ognahay in cadow badan isu kaana bahaystey, kuwa hor lehna ku soo biirayaan cadowgeenna. Marka waxaan xaq u leennahay in aynu iska dhicinno. Marka aynu iska dhicinno oo iska erino, uma baahnin in aynu markaa niraahno, ka hari mayno oo waa ka aar gudaneynaa.
Waa in aynu awooddeenna u weecinnaa in aynu midowno oo dhisanno qarankeennii Soomaaliyeed. Taas ayaa mudan in howl iyo juhdi badan la galiyo. Dibna loo dhigto haddii aynu rabno in aan caddaaladda hor keenno kuwii dhibka u geystey dadka Soomaaliyeed. Waayo marka aad Qaranka Soomaaliyeed dhisato, waxyaabo badan oo aan haatan suura gal aheyn ayaa suuro gal noqon doono.
Ku dhaqanka Shareecada Islaamka: In badan oo halgamayaasha ka mid ah oo iiga aqoon roon shareecada ayaa ka hadasha in dalka lagu dhaqi doono shareecada Islaamka. Anigu waxayba ila aheyd in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay weligoodba ku dhaqmaan shareecada Islaamka wallow Qaranka Soomaaliyeed oo sita magaca Dowlad Islaami ah aan weli la arkin. Mar arrintu haddey sidaas tahay, anigu cilmi uma lihi qaabka iyo muuqaalka ay leedahay dowlad Islaami ah. Hase yeeshee, waxaan jeclahay in aan cabbiro sida ku habboon in loo dhiso Qaran Soomaaliyeed oo Caddaalad ku dhisan.
Mar haddii dadka Soomaaliyeed yihiin dad Muslimiin ah 100%, ma dhici doonto in ay dadka Soomaaliyeed ka hor yimaadaan caddaaladda Islaamka. Saas oo ay tahay, Caddaaladda Islaamka ayaa waxaa ka mid ah in Muslimiintu isu turaan, isu naxariistaan,is cafiyaan, is kaashadaan,isu gargaaraan oo isu naxariistaan. Waxaa caddaaladda islaamka ka mid ah in la isu dul qaato, in la is dhegeysto, in talada la wadaago, in aan la isu gooddin, in howlaha sida ay u kala mudan yihiin loo kala hormariyo, in aan la deg degin, in wanaagga la is faro, xumahana la iska waaniyo.
Dowladda Islaamka ahi waxay horumarisaa adeegga bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, tas-hiilaadka horumarka umadda sida ganacsiga, la macaamilka umadaha kale gaalo iyo Islaamba. Dowladda Islaamka ahi waa mid fur furan oo dadku ay u tilmaami karaan wixii ka qaldan, Hoggaanka Islaamku waa in ay soo doortaan dadka muslimiinta ah.
Haddaba halgamayaasha waxaan anigu kula talin lahaa sidan:
In marka horeba ay garowsadaan in dadku Islaam yahay weligoodna ku dhaqmi jireen Islaamka.
In Barnaamijka dhisidda qaranka Soomaaliyeed uu yahay mid ballaaran una baahan in sida howlaha u kala horreeyaan loo kala hormariyo.
In la joojiyo in aynu u gooddinno Caalamka intiisa kale, innagoo og in qaar badan oo Caalamka ka mid ah ay duullaan nagu yihiin. Waana in aynu innagoo iska dhicineyno aynu haddana si macruuf ah ula dhaqanno caalamka intiisa kale. Ma aha in aynu caro kula dhacno umadaha kale ee adduunka. Xataa waa in aynu ka taxaddarno hadalada dhalin karo in dadku naga baqaan. Waxaa la yiri “nin xanaaqay laga badi.” Innagoo danteenna ka shaqeyneyna ayeynu umadaha kalena si wanaagsan ugu sharraxi karnaa in aynaan duullaan ku aheyn oo dadka Soomaaliyeed yihiin dad soo dhaweeya martidooda, dariskooda, macaamiishooda dhinaca ganacsiga, iyo in aynu nahay dad sharaf badan oo xumaha neceb.
In halgamayaashu isu keenaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ah, xataa kuwa aan halgamayaasha la fikirka ahayn. Waayo ilaahey dadka ma simin, waxaase xaqiiqa ah in marka dad kala fikrad duwan meel la isugu keeno balse ay dhammaan wadaagan hal dan oo guud, oo dhammaan ay cabbiraan waxa ay iyaga la tahay si danta guud loo gaaro in markaa ay soo bixi karaan go’aamo wax ku ool ah.
Sideedaba, waa in aynu garanno in dadka ilaahey uumay maskaxdooda siyaabo kala duwan wax u aragto. Marka Islaamku ma diidano in dadka Islaamku yeeshaan aragtiyo kala duwan. Taas ooy tahay, xaalka ay Soomaaliya maanta ku jirto oo ah mid dadkii lagu kala geeyey waxaa muhiim ah in Halgamayaashu ay dadaalkooda oo dhan isugu geeyaan sidii ummadda Soomaaliyeed loo mideyn lahaa. Taas macnaheeda ma aha in ay dhammaantood hal fikrad ah wada qaataan ee waa in la darso koox kasta wixii ay iyaga la tahay oo la isu keeno dhammaan fikradahaas kala duwan, ka dibna la raadiyo meel dhexe oo la isugu yimaada. Waa in aynu garowsannaa in aan dhammaanteen hal fikir wada fahmi Karin mar qura. Hoggaanku waa in uu waqti iyo juhdi dheer geliyaa sidii uu u qancin lahaa dadkaas kala aaraa’ada duwan.
Waxaan qormada ku soo koobayaa, hoggaanka halgamayaashoow “Faanoole fari kama qodna.” Farriinteydu waxay ku qotontaa afar arrimmood: 1. In aad is maqashaan, isu turtaan, is fahamtaan, isu tanaasushaan, cadowg xoog iyo xeelba ku saartaan. 2. In aad u naxariisataan umadda Soomaaliyeed oo talada aad wax ka gelisaan, oo aad Soomaali isu doontaan oo aadan kala geyn. In aad ka fikirtaan, in malaayiin Soomaali ah ay dayacan yihiin rajada kali ah ay qabaanna aad idinku tihiin. 3. Waa in aad ogaataan in aad idinkuba bini-aadam tihiin oo ad gefi kartaan. Sidaa darteed talada u dad badsada oo ku soo darsada kuwa xataa idinka soo horjeedo waayo dadka Soomaaliyeed dal, dad, diin iyo duunyo ayaa ka dhexeyso. 4. La macaamala caalamka kale haba ku jireen kuwa nagu soo duulaye. Waxaa la soo gaarey waqtigii aynu laan nabadeed u taagi laheyn caalamka intiisa kale, oo ay ku jiraan kuwa nagu soo duuley. Wixii la xisaabtan ah ha inoo ahaato mar kale oo aynu dib u hananey Qarankii Soomaaliyeed ee la qalibey. Mahadsnidiin.
Faafin: Somalitalk.com | Dec 16, 2008